असहिष्णु समाज - Jagaran Post
Jagaran Post ३ भाद्र २०७७, बुधबार ०६:०२ सम्पादकीय
नेपालको संविधानले महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २४ प्रतिशत, मधेशी २० प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, थारु ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि भनेर ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। संविधानको प्रावधान बमोजिम विभिन्न जाति, समुदायले विभिन्न सरकारी निकायमा आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन् । लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गर्दा आरक्षणका आधारमा निश्चित सिट सुरक्षित गर्ने गरेको छ ।
संविधानमै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अझैसम्म आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य अर्थात् गरीब बाहुन–क्षेत्रीले आरक्षण सुविधा पाउन सकेका छैनन। संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकविपरीत गरीब बाहुन–क्षेत्रीलाई राज्यले नै विभेद गरिरहेको अवस्थामा तिनै बाहुन क्षेत्रीहरुमाथी कतिपय अन्य समुदायहरु नियोजितरुपमा खनिनुको तात्पर्य के हुन सक्ला? प्रायोजन के हुन सक्ला?
फेरि राज्यले नै बिभेदमा पार्दै आईरहेको बाहुन क्षेत्रीहरुले आखिर कसको के बिगारिदिएका छन र? किन हुन्छ बाहुन क्षेत्रीहरुमाथी निरन्तर आक्रमण? किन हाम्रो समाज यतिविघ्न असहिष्णु बन्दैगएको छ? किन गाली गरिंदै आईएको छ बाहुन क्षेत्रीलाई? कि बाहुन क्षेत्रीले अन्य समुदायको रोजिरोटि खोसिदिएका छन कि? या अन्य समुदायलाई तथानाम गाली गर्दै आएका छन कि या अन्य समुदायको अस्तित्व नै स्विकार गरेका छैनन कि? आखिर किन आक्रमण बाहुन क्षेत्रीहरुमाथी निरन्तर? आखिर के बिगारिदिए बाहुन क्षेत्रीहरुले अन्य समुदायको? किन यतिविघ्न जलन र घृणा बाहुन क्षेत्रीहरुमाथी? कारण के?
हालैमात्र मंगोल होप नामक एक युट्युव च्यानलमा बाहुन क्षेत्रीहरुलाई तथानाम गाली गर्दै बाहुन क्षेत्रीलाई सामन्ती, दलाललगायतका अनेकन तुच्छ शब्द प्रयोगमा ल्याऊँदै बाहुन क्षेत्रीहरुलाई देशबाट लखेट्नुपर्ने आशयको र्याप गीत सार्वजनिक भएको छ। यतिमात्र होईन, उक्त र्याप भिडियोमा नेपालको झण्डामा आगो लगाएर जलाईएको छ भने भारतीय सुधारवादी राजनीतिक नेता, भारतीय संविधान का निर्माता तथा बौद्ध गुरु बाबासाहेव आम्बेडकरसंगै गौतमबुद्धको तस्विरसहित बाहुन क्षेत्रीमात्र होईन, बाहुन क्षेत्री नेताहरुलाई समेत तथानाम गाली गरिएको छ।
आखिर किन? त्यस्तो के बिगारिदिए बाहुन क्षेत्रीले अन्य समुदाय अझ विशेष गरेर मंगोलहरुलाई र यतिविघ्न सत्तोसराप किन?
कसैको सत्तोसरापले कसैको पत्तासाफ हुने होईन। मंगोलहरुले बाहुन क्षेत्रीलाई स्राप्दैमा बाहुन क्षेत्रीको पत्तासाफ हुनेपनि होईन र बाहुन क्षेत्रीहरु देश छोडेर भागेर कतै शरणार्थी हुनेपनि छैनन।
बाहुन क्षेत्रीमात्र किन? कुनै एक असहिष्णु समाजको रिसले अर्को समुदाय बिस्थापित, त्रसित या कमजोर कदापी बन्ने होईन, बरु झनै मजवुत बनेर जान्छ।
को हुन बाहुनक्षेत्री? को हुन आदिबासी जनजाती? को हुन मंगोलियन र को हुन सिमान्तकृत समुदाय? हामीलाई यो जातीयताको रडाको किन चाहियो आखिरमा? समाजमा सबै मिलेर के बस्न सकिँदैन र? कुनै पनि देश या भूगोल कुनै एक जाती या समुदायबिशेषको मात्र हुन्छ र? यो कस्तो असहिष्णु चरित्र? कस्तो बिचार, यो कस्तो आडम्वरता?
समाजमा एक समुदाय र अर्को समुदायबिच वैमनस्यता, रिसराग, बैरभाव, घृणा तथा उत्तेजना फैलाएर तिनै नेता रातारात सत्ता, डलर र युरोको बार्गेनिङ्गमा मस्त भए, तर तपाईंहामी आम नागरिक भने उ चुच्चो नाकवाला, हामी थेप्चो नाकवाला, उ जनैवाला र हामी जनै नभएका भन्दै समाजमा घृणा र मनमुटाव पालेर बसेका छौं। आखिर कैलेसम्म यस्तो तिक्ततापूर्ण व्यवहार?
यो देश, यो समाज बाहुन क्षेत्रीहरुको मात्र होईन, बाहुन क्षेत्रीका अलावा बसोबास गर्ने अन्य सबै समुदाय र ब्याक्तिहरुको साझा भूमी हो। परिश्रम गरेर फल प्राप्त गर्नका लागि सबैको लागि उर्वर भूमी हो। माटोले कहिल्ल्यै विभेद गर्दैन। विभेद गरिरहेका छौं त हामीले हामी आफैलाई गर्दैछौं, हामीले अर्कोलाई गर्दैछौं। अर्काको अस्तित्व स्विकार्न नसक्नु चरम असहिष्णुताको पराकाष्ठा हो।
आरक्षणकै कुरा गर्ने हो भने बाहुन क्षेत्रीहरुले भन्दा बढि आरक्षणको सुविधा अन्य समुदायका नागरिकले लिईराखेका छन। एक त यो आरक्षणको ब्यवस्था नै खारेज गरियोस। आरक्षणका नाममा यौटा योग्यवान पाखा परिराखेको छ भने जातपात या विभिन्न वाहाना देखाएर अयोग्य पनि पदमा पुगेको छ।
सुधार त नेतृत्त्वबाटै गर्नुपर्दछ। खल्तिका नियुक्तिले योग्यतालाई पाखा र अयोग्यलाई पदको भागिदार बनाईएको छ। नेतृत्त्व त सुध्रीनु नै पर्दछ। यदि नेतृत्त्व सुध्रीन्न भने समाजमा यस्ता आक्रोश फैलिई नै रहन्छन। यो देशमा बाहुन क्षेत्रीमात्र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने भन्ने छैन। योग्यता, निर्वाचन, क्षमता र भिजनसहित जो आए पनि यो देशको उच्च पददेखि विभिन्न नितिनिर्माण एवं निर्णायक पदमा बसेर देश हाँक्न सक्नेछन। तर, त्यसको लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्वन गर्नैपर्दछ। आफूले सकिन्न भने अर्काको अस्तित्त्व चाहिँ स्विकार गर्न पनि जान्नुपर्दछ। रातदिन बाहुन क्षेत्रीलाई स्राप्नुभन्दा बरु आफू पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा यो देशको उच्च पदमा आसिन हुनयोग्य पनि बन्ने कि? बाटो कसले छेकेको छ र? राज्यले? कानुनले? ब्यवस्थाले या बाहुनक्षेत्रीहरुले?